Qof kastaa wuxuu rabaa shaqo wanaagsan iyo waxbarasho ka caawin doonta inay sii fogaan. Si kastaba ha noqotee, dad badani waa inay ka tanaasulaan shaqadooda iyo yoolalkooda waxbarasho sannadba sannadka ka dambeeya. CMOAPI way ogtahay sida ay muhiimka u tahay in waxbarashadu sax tahay, waana sababtaas awgeed waxaan u caawinaa sidii aan akhristayaashayada uga bari lahayn sawirro iyo waxyaabo kamarado ah dib u eegistayada iyo talooyinkayaga. Khasab kuguma aha inaad ku bixiso qalab aad u badan haddii aad isticmaasho ilo dib-u-eegis aan ku siinno halkan.
Deeqda-waxbarasho ee CMOAPI waa hormar cusub oo aan ku faaneyno inaan ku dhawaaqno. Waa deeq-lacageed $ 2000 oo sanadle ah oo loogu talagalay in lagu caawiyo ardayda inay ku guuleystaan ​​hamigooda waxbarasho iyo shaqo. Deeqdan waxbarasho waxaa la siin doonaa hal arday sanad walba si looga caawiyo bixinta kharashyada waxbarashada. Waxaan raadineynaa inaan labalaabno tirada deeqda waxbarasho ee sanadka soo socda. Deeqda-waxbarasho ee 'CMOAPI' waa deeq yar oo dhinacayaga ka timid si aan uga caawino ardayga inuu ku guuleysto riyadooda. Haddii aad xiisaynayso barnaamijkayaga deeq-waxbarasho oo aad rabto inaad ka qayb-gasho tartanka, fadlan si taxaddar leh u aqri dhammaan macluumaadka hoos ku taxan.
·Waxaa la aqbalayaa ama hadda dhigta jaamacad la aqoonsan yahay oo loogu talagalay barnaamij waqti-buuxa ama qalin-jabin ah oo Mareykanka ah.
·Ugu yaraan GPA isku midka ah ee 3.0 (ama u dhigma).
·Caddaynta isqorista koorsada shahaadada koowaad ee jaamacadda ama shahaadada koowaad ayaa loo baahan yahay.
·Ku dul qor maqaal mowduuca "Waa maxay cilmi baarista macaamiisha iyo qandaraas?"
·Waa inaad noo soo dirtaa qoraalkaaga 7 ama Diisambar 2020 ama ka hor.
·Waxaad u diri kartaa qoraalkaaga (qaab MS Word qaab ah oo keliya) emayl ku soo dir [emailka waa la ilaaliyay]
·Ha ilaawin inaad ku sheegtid magacaaga, emaylkaaga, iyo lambarka taleefankaaga dalabkaaga.
·Waxaa sidoo kale lagaa rabaa inaad ku sheegto faahfaahinta kulleejada / jaamacadda arjigaaga.
·Kaliya qoraal u noqon doona mid gaar ah oo hal abuur leh ayaa loo qaddarin doonaa tartanka.
·Ku guuleystaha waxaa lagula soo xiriiri doonaa e-mayl waana inuu ku soo jawaabo 5 maalmood gudahood si loo aqbalo abaalmarinta. Haddii aan jawaab laga helin muddadaas gudaheeda, guuleyste kale ayaa loo dooran doonaa inuu ku guuleysto abaalmarinta halkii.
·Kaliya qoraalada la heli doono waqtiga iyo kahor waqtiga loo qabtay ayaa loo qaddarin doonaa tartanka.
·Qoraalada waxaa lagu xukumayaa qiyaaso badan. Qaar ka mid ah waa: midnimo, hal-abuurnimo, fekerid, qiimaha macluumaadka la bixiyo, naxwaha iyo qaabka iwm.
·Ku guuleystayaasha waxaa lagu dhawaaqi doonaa 15-ka Diseembar, 2020.
Qaanuunkayaga Khaaska ah:
Waxaan hubinnay inaan macluumaadka ardayga ee la wadaagi doonin, iyo in macluumaadka shaqsiyadeed oo dhan loo xafidayo isticmaalka gudaha oo keliya. Ma siin karno faahfaahin arday kasta dhinacyada saddexaad sabab kastoo jira, laakiin waxaan ilaashannaa xuquuqda aan u isticmaalno qodobbada naloogu soo gudbiyey si kasta oo aan rabno. Haddii aad u soo gudbiso maqaal CMOAPI, waxaad na siisaa dhammaan xuquuqaha waxa ku jira, oo ay ku jiraan lahaanshaha waxyaabaha la sheegay. Tani waa run haddii gudbintaada loo aqbali karo guuleystaha iyo in kale. CMOAPI.com waxay xaq u leedahay inay adeegsato shaqooyinka la soo gudbiyay oo dhan si loogu daabaco maadaama ay u aragto inay ku habboon tahay iyo meesha loo arko inay ku habboon tahay. Ku guuleystayaasha waxaa la xaqiijin doonaa markey dhiibi karaan caddeynta isqorista ee jaamacad la ogolaaday, koleej ama dugsi. Tan waxaa ku jira sawir aqoonsi arday ah oo hadda jira, transcript ka dugsiga, warqad caddeyn ah, iyo nuqul ka mid ah biilka waxbarashada. Ku guuleyste labaad ayaa la dooran doonaa haddii guuleystaha koowaad uusan bixin karin caddaynkan.